Awood Sare, Hibo iyo Hibo | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Ardayda qaar waxay leeyihiin xirfado aqooneed, karti garasho, karti hogaamineed iyo karti hal abuur leh oo ka baxsan asxaabtooda fasalka. Bartayaasha horumarsan waxay xaq u leeyihiin jawi waxbarasho halkaas oo baahidooda waxbarasho ee gaarka ah loo qorsheeyay laguna ixtiraamo. Barnaamijyada waxbarashada sare waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha ardaydaas.
Ardayda waxbarashada sare leh waa caruur iyo dhalinyaro leh karti aad u fiican marka loo eego kuwa kale ee da'dooda, khibradooda ama bay'adooda. Ardayda waxbarashada sare waxaa lagu gartaa iyada oo loo marayo nidaamka baaritaanka oo ah mid dhinacyo badan leh, oo ay ku jiraan u kuurgalida macalinka, ka qeyb qaadashada waalidka, ka qeyb qaadashada ardayda, waxqabadka fasalka, iyo macluumaadka imtixaanka oo la mideeyay. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah ee leh su'aalaha ama walaacyada ku saabsan ilmahooda iyo adeegyadooda waa inay la xiriiraan macalinka fasalka ilmahooda, macallinka tacliinta sare ee dugsiga ama Diane Rundquist , Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare ee 952-401-5100.
Aqoonyahan Hibo u leh
Aqoonyahanada Sare ee tacliinta sare leh
Hadafka Barnaamijka Barashada Sare ee Minnetonka waa:
siiyaan ardayda barnaamijyo iyo fursado ay ku ogaadaan, ku horumariyaan kuna ogaadaan awooddooda shaqsi ahaan iyo wax ku biirin, xubno mas'uul ka ah bulshada iyo
Taageerida waxqabadka heer u dhigma awooda ardayga.
Aragtida Barnaamijka Waxbarashada Sare ee Minnetonka waa in lagu horumariyo ardayda:
ka fikir hal abuur iyo dhaliil si aad wax u cusboonaysiiso
muuji adkaysi iyo adkeysi wajihi kara caqabado iyo dib u dhac
iskaashi adoo si qoto dheer u dhageysanaya, u fiirsanaya si xikmad leh, si maskax leh u hadlaya, iyo geesinimo u dhaqaaq
tixgeliyaan aragtiyo badan oo ku saabsan go'aan gaarista iyo hoggaaminta
raadso isku dheelitirnaan xagga garashada, bulshada iyo caafimaadka shucuurta ah
si xilkasnimo leh ugu biiriya bulshada caalamka
Ardayda waxbarashada sare waxay leeyihiin astaamo u gaar ah oo u baahan khibrado waxbarasho oo ku habboon. Waxbarashadu waa inay siisaa fursado ku habboon qof kasta kartidiisa, dhiirigelintiisa, nooca & xawaaraha barashada iyo kartidiisa (iyadoo la raacayo Xeerarka Guddiga Gobolka).
Barnaamijyada Horukaca Sare ee Minnetonka waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha bartayaasha laga yaabo inay maskax ahaan hibo u leeyihiin, aqoon ahaan horumarsan yihiin, ama labadaba! Adoo haysta barnaamijyo kala duwan - mid walbana si taxaddar leh loogu talagalay in lagu dheereeyo xoogaa barasho gaar ah - waxaan siineynaa caqabado dheeraad ah ardayda meelaha ay u baahan yihiin inay ku koraan oo ku barwaaqoobaan.
Carruurta leh awoodda aqooneed ee gaarka ah sida lagu muujiyey awoodaha aadka u horumarsan ee dhibaatada xallinta iyo soo saarista aqoonta iyo heerarka sare ee kala duwanaanta, caqliga, caqliga, iyo fikirka aan la taaban karin. Barteyaashani waxay leeyihiin dhibcaha IQ laba leexasho oo heer sare ah ama ka badan heerka caadiga ah waxayna awood u leeyihiin waxqabad sare oo ku saabsan howlaha sababaynta marka lala barbardhigo kuwa kale ee isku da'da, khibrada iyo deegaanka ah. Barnaamijka baalasha dugsiga hoose, iyo Seminaarka HP ee heerka dhexe, waxaa loogu talagalay in loogu adeego ardayda hibada leh, caqli ahaan iyo waxtar ahaanba.
Carruurta muujisa waxqabad aan caadi ahayn oo ku saabsan hal ama in ka badan aagag tacliimeed. Waxqabadka gaarka ah waxaa ka mid ah ka shaqeynta si ka baxsan heerka darajada iyo lahaanshaha iyo / ama ku dabaqida aqoonta qaabab wax beddelaya, oo isku dhafan. Kordhinta Tacliinta, Kobcinta Tacliinta, Baadhitaano Madaxbanaan, iyo PROJECTthink waa dhamaan barnaamijyada u adeega ardayda aqoonta leh ee heerka hoose. Maamuus iyo koorsooyin la dedejiyey ayaa daboolaya baahiyaha ardayda dugsiga dhexe ee aqoonta leh. Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu bixiyaa xulashooyin tacliimeed oo aan la qiyaasi karin si ardayda ay u weyneeyaan waaya-aragnimadooda dugsiga sare, u raacaan damacyadooda una diyaar garoobaan kuleejka iyo xirfadda.
Fursado loogu talagalay kordhinta tacliimeed ayaa laga heli karaa dhammaan iskuulada, iyada oo loo marayo khibradaha dugsiga dhexdiisa ama naadiyada tacliimeed ee dugsiga ka dib iyo nashaadaadka. Arday badan ayaa fursad u leh inay ka qayb galaan tartamada tacliimeed ee heer gobol, gobol iyo heer qaran.
Barnaamijyada Kobcinta Dugsiyada Hoose
Barnaamijyada Tayeynta Dugsiyada Dhexe
Barnaamijyada Tayeynta Dugsiga Sare
Xiriirka Waxbarashada Sare
Agaasimaha Barnaamijyada Waxbarashada Sare
Codsiga barnaamijka Navigator